I-bt-auto bulletek auto led headlight factory led Umkhiqizi wamalambu e-LED - i-Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd.
I-Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (eyaziwa kakhulu nge-BT- AUTO) Itholakala e-Guangzhou, e-China.Sisebenza ngokusemthethweni kuma-auto LED Headlight bulbs iminyaka.Sihlinzeka ngemikhiqizo namasevisi asezingeni eliphezulu (OEM kanye ne-ODM) kumakhasimende.
Imikhiqizo ye-BT-AUTO LED izinzile ngokusebenza okuphezulu.Besikhulisa uhla lwemikhiqizo yokukhanyisa i-auto LED, ukuze sihlangabezane nezidingo zamakhasimende.
I-BT-AUTO iyisevisi ye-One-Stop, Izinhlobonhlobo zemikhiqizo yethu zingahlangabezana nezicelo zamakhasimende amaningi.Ngethimba lethu elinolwazi lokuthengisa nesevisi, siyakwazi ukuqaphela inkolelo yethu "Ikhasimende Kuqala, Isevisi Ephambili".
I-BT-AUTO ibisebenza ngokukhethekile ezimakethe zamazwe ngamazwe zokukhanyisa i-Auto iminyaka.Sakhe ubudlelwano bebhizinisi obuqhubekayo namakhasimende avela emazweni amaningi nasezindaweni, njengaseYurophu, eRussia, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia nokunye, futhi sazuza idumela elihle.Samukela ngobuqotho ozakwethu abakhethekile abavela kuwo wonke umhlaba.
Ikhwalithi ye-BT-AUTO Lighting ihlezi iphakeme.Sisebenzisa ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kuzo zonke izinqubo, njengalezi: ukuhlolwa kwezinga lokushisa eliphezulu neliphansi, ukuhlola ukumelana nokushisa, ukuhlolwa kokuguga, ukuhlolwa okungangeni manzi, ukuhlolwa kokuvikela uthuli, ukuhlolwa kwamandla kagesi aphezulu/aphansi, njll..
Amandla e-BT-AUTO asungulwa.Sizinikezele ocwaningweni nasekuthuthukisweni, siqhubeka sethula imikhiqizo emisha njalo.
Umlando Wokukhanya Kwekhanda kwe-BT-AUTO LED
Siyiqembu elisebasha nelinomdlandla, elichwepheshile nelinolwazi futhi.
Sihlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu kanye nemikhiqizo esezingeni eliphezulu yamakhasimende ethu.
Ubungqabavu bethu ukusungula izinto ezintsha.Sizinikezele ku-R&D, siqhubeka sethula imikhiqizo emisha njalo.
Inkolelo yethu ithi "Ikhasimende Okokuqala, Isevisi Ephambili".
[TOUR] Uhambo Losuku Olungu-1 oluya e-Jingshan Lake, Qingy...
[Umkhiqizo] I-HID Ballast T5 55W CANBUS Testi...
[PRODUCT] Ukuqhathaniswa kwe-Halogen, HID, Spe...
[UMKHIQIZO NOMSEBENZI] Ithimba le-BT-AUTO 2 ...